Maalinta: Oktoobar 26, 2019
Tacsida Qaranka si loo bilaabo
Nidaamka Ilaalinta Aagga Wanaagsan ee Karagöz GAG Balloon wuxuu shaqadiisa ka bilaabayaa xadka Suuriya bisha November. Buufinku wuxuu lahaan doonaa dherer dhererkiisu yahay 17 mitir, mugga xNUMX mitir cubic ah wuxuuna u adeegi doonaa dhererka mitirrada 430. Nidaamku wuu sii socdaa [More ...]
Yusuf Gürsoy, oo ka shaqeyn jiray darawalka baska ee degmada Mersin ee Magaalo xeebeedka, ayaa saxeexay sheeko geesinimo leh. Koray baska wiilkii hooyadiis ayaa dhibay Gürsoy, hooyo iyo cunug ayaa loo keenay isbitaal. Joogsi ma leh [More ...]
İBB waxay qaadday ficil ..! Ka Hortagga Khataraha Mashaariicda Mitar
IMM waxay sii wadaysaa inay ka shaqeyso mashruucyada metrooga kuwaas oo dhismahooda loo joojiyey sababao dhaqaale awgood. Madaxa Iimaanka Nidaamka Tareenka Assoc. Dr. Pelin Alpkökin, si loo sugo mashaariicda khatarta ku keeni kara gobolka hadda jira [More ...]
Mashruuca Dib-u-eegista iyo Qiimeynta Mashruuca Istanbul ee Wasaaradda Deegaanka iyo Magaalooyinka ayaa la qaban doonaa Noofembar 28. Bayaanka ayaa lagu soo dhigay mareegaha guud ee ogolaanshaha qiimaynta iyo kormeerka kormeerka cimilada [More ...]
Qandaraaska mashruuca jidadka, oo ah mid ka mid ah ajendayaashii ugu yaabka badnaa muddadii la soo dhaafay, waa la kansalay SANAD WAA "Riyo nus qarni ah la rumoobay" iyadoo halku dhiggii 10 Diseembar 2018 Duqa Magaalada Kartepe [More ...]
Subag Gebze Subway waxaa Allah u aaminay ..!
Kuxigeenka Gudoomiyaha Kooxda Wanaagsan, Kocaeli Kuxigeenka Lütfü Türkkan Wasiirka Gaadiidka iyo Kaabayaasha Cahit Turhan oo ka jawaabaya soo jeedinta, ayaa sheegay in aan la helin borotokool lagu sameeyo mitirka Gebze. Isaga oo ka hadlaya mowduuca, Lütfü [More ...]
TransAsia Express Ankara iyo Tehran Tareen Route duulaan soo jeedo Airfares: kordhaysa ee rakaabka iyo xamuulka gaadiidka by tareenka u dhexeeya Turkey iyo Iran si tareenka Tehran-Ankara dhexeeya TransAsia [More ...]
Gudiga akadeemiyada ee 6 oo ka socda jaamacada Karabuk, booqashada Shiinaha gudeheeda iyada oo ku dhex jirta borotokoolka ay la saxeexatay shirkadda tareenada ee CRRC - MNG, oo ka mid ah shirkadaha ugu waaweyn adduunka ee soosaarka nidaamyada tareenka iyo gawaarida wadooyinka. [More ...]
Maanta taariikhda 26 Oktoobar 1936 Eskiköy-Çetinkaya khadka ayaa la furay. Tareenka koowaad ee dhuxusha ayaa yimid Ankara. 26 Oktoobar 1953 Gaziantep-Narlı Railway khadka ayaa la galiyay adeeg. 26 October 2016 Samsun waxaa laga soo saaray Bursa Samsun oo laga soo saaray Bursa [More ...]